कहाँ जान्छ तेल ? - Nepal News - Latest News from Nepal
कहाँ जान्छ तेल ?
२०७२ पौष ९ , घोराही दाङमा यो साता मात्रै ६० हजार लिटर पेट्रोल भित्रियो। मुख्य बजारका चार चारवटा पेट्रोल पम्पबाट तेल बेच्न दिइयो। तर रातभर लाइन लागेर पनि तेल भर्न नपाएपछि बुधबार दिउँसो घोराहीको एउटा पम्पमा झडप भयो।
उपभोक्ताहरूले केहीबेर चक्का जामसमेत गरे। केही समयदेखि नाकाहरू सहज भएसँगै जिल्लामा इन्धन उल्लेख्य मात्रामा आइरहेको छ । तर उपभोक्तालाई भने उस्तै सास्ती छ।
बुधबार मात्रै दाङमा ४० हजार लिटर पेट्रोल भित्रिएको थियो। तर पम्पहरूबाट प्रहरीकै अगाडि ग्यालिनभर तेल भरिए। मोटरसाइकल लाइनमा खचाखच भइरहेका बेला केही ुदादाुहरूको ग्याङ आयो अनि सयौं लिटर पेट्रोल ग्यालिनमा हालेर गयो। प्रहरीले पनि केही गरेन । हेरिरह्यो । अनि जब मोटरसाइकलमा तेल भर्ने बेला भयो, अनि पम्पवालाले भने, ुतेल सकियो।ु
पम्पमा कति लिटर इन्धन बाँकी छ भनेर उपभोक्ता जान्दैनन्। तर कति हजार लिटर तेल आएको छ भनेर थाहा पाएका उपभोक्ताहरूले हिसाब गरिरहेका हुन्छन्। ुजब मोटरसाइकलमा हाल्ने बेला हुन्छ अनि प्रशासनको कोटा मात्रै छ भनेर पम्प बन्द गरिन्छ,ु रातभरि लाइन लागेर पनि तेल नपाएपछि निराश भएका घोराहीका प्रितम वलीले भने, ‘यत्रो तेल आउँछ, अब त सजिलै पाइन्छ भन्यो फेरि उस्तै छ, यो तेल कहाँ जान्छरुु
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक क्षेत्रका सवारी साधनलाई भन्दै प्रत्येक पम्पमा प्रत्येक लटमा ५ सय लिटर पेट्रोल र ५ सय लिटर डिजेल स्टक राख्छ। बुधबार आएकोमध्ये करिब ५ हजार लिटर पेट्रोल प्रशासनको नाममा राखिएको छ।
तर फेरि दुई दिनपछि आउने तेल पनि प्रशासनको नाममा त्यसैगरी कोटा स्टक रहन्छ । जिल्लामा सामान्य दिनमा दैनिक १ हजार लिटर पेट्रोल र ४० हजार लिटर डिजेल खपत हुन्छ।
बुधबारमात्रै आएको पेट्रोलको मात्रा
सबैलाई पुर्‍याउने हो भने करिब एक सातालाई सजिलै पुग्छ । उसो त आयल निगममा पैसा जम्मा गरेअनुसार पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले पनि सहज इन्धन पाएका छैनन्। जिल्लामा अर्डर भएको तेलको ६० प्रतिशत तेल अहिले पनि राजधानी पठाइरहेको छ।
थोरै तेल आउँछ, त्यो सबैलाई पुर्‍याउन सकिँदैन। त्यसैले उपभोक्ताहरू विरोध गर्छन् । अनि व्यवसायीहरू तेल बेच्ने मन पनि गर्दैनन्। ुआयल निगममा व्यवसायीको लाखौं रुपैयाँ छ तर हामीले हजारौंको मात्रै तेल पाउँछौँु, पेट्रोलियम एसोसिएसन दाङका अध्यक्ष दामोदर घिमिरे भन्छन्, ‘थोरै तेल आउँछ, सबैलाई पुग्दैन त्यसैले लफडा हुन्छ अनि व्यवसायीहरूले पनि तेल ल्याउने मन गर्दैनन्।ु
उनका अनुसार दुई दिनयता फेरि नाकामा कडाइ हुन थालेको छ। भारतीय भन्सारले डिजेल र ग्यासका गाडीहरू सिमित मात्रामा पठाउन थालेको छ। राप्ती र भेरीमा आउने इन्धन नेपालगन्जको रुपैडिहा नाकाबाट भित्रिन्छ। भारतको गोन्डाबाट इन्धन भरेर आउने ट्यांकर तथा बुलेटहरूलाई भारतीय सुरक्षा निकायले सिमित मात्रामा छोड्ने गरेको छ।
आएको तेल पनि व्यवस्थित वितरण नहुँदा अहिले उपभोक्ताहरूलाई सास्ती भइरहेको छ। प्रहरीकै पहरामा पम्पहरूले तेल वितरण गर्ने भनिए पनि त्यहाँ पहुँचवाला र ुदादाु हरूले मात्रै तेल पाउने गरेका छन्।
ुहामी त्यस्तो दादागिरी पनि गर्दैनौँ, लाइन लाग्न थालेको तीन पटक भयो, एक सय बाइकमा तेल नभर्दै सकियो भन्छन्’ बुधबार तुलसीपुरको एउटा पम्पमा लाइन बसेका उपभोक्ता मनोज चौधरीले भने, ‘अस्ती पनि २ हजार लिटर आयो भन्थे, अहिले पनि ४० हजार लिटर आएको छ रे तर, तेल कहाँ जान्छ कुन्नी रु ु
आयल निगमको डिपो कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार अहिले इन्धन सामान्य अनुपात मै छ। गत वर्ष यही महिनाको पहिलो हप्तामा पनि यत्ति नै इन्धन खपत भएको थियो, जति अहिले भित्रिएको छ । तर पनि तेलको अभाव उस्तै छ।
ुअहिले यहाँ आएको तेल गत वर्षको बराबर देखिन्छ तर पनि यहाँ अभाव भइरहेको देखिन्छु, डिपोका प्रमुख विपिनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ुअहिले बाहिर जिल्लाका सवारी साधन पनि यहाँ आएर तेल भरिरहेका छन् त्यसैले पनि यहाँ तेल नपुगेको हुनसक्छ।ु
पम्पमै यस्तो हाहाकार भइरहँदा बजारमा पेट्रोल र डिजेलको कालोबजारी उस्तै छ। पेट्रोलको गुणस्तरअनुसार १ सय ५० देखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी भइरहेको छ।
आठ महिनादेखि गोदाममा थन्किएको राहत सामग्री वितरण